Le Theory Theory Ixhuma Ukuthi Ngahlangana Kanjani Nonyoko Nabangane Ngendlela Engajwayelekile - Ukuzijabulisa
Le Theory Theory Ixhuma Ukuthi Ngahlangana Kanjani Nonyoko Nabangane Ngendlela Engajwayelekile
Isithombe se-Alamy Stock
Abalandeli bebelokhu beqhathanisa phakathi kwe- I-How I Met Your Mother futhi Abangane okwezinduna. Kulula kakhulu ukukwenza: Yomibili le mibukiso izungeza iqembu lezinto ezingama-20 ezizulazula ngothando, ezocansi, kanye nemisebenzi yazo eNew York City — zinamahlaya amaningi endle.
Kepha kuthiwani uma le mibukiso emibili ifana ngokufana? Kuthiwani uma omunye wabo ( Abangane ) umcabango ongokoqobo womlingiswa ovela I-How I Met Your Mother ? Kuzwakala kukhishwe kude, akunjalo?
Umsebenzisi weReddit ogama lakhe linguSangamFlevo akacabangi kanjalo. Ngamafuphi (kepha uyaqiniseka) umbono wabalandeli, USangamFlevo ucabanga lokho Abangane empeleni yindaba eqanjiwe yalokho i I-How I Met Your Mother izimpilo zabalingiswa bekungaba njalo utshelwe ngamehlo kaTracy McConnell (Umama), osezokufa.
Ake sibuyele emuva. USangamFlevo ucabanga ukuthi, ngaphambi nje kokuba ashone, uTracy wayefuna ukubhala incwadi ngomyeni wakhe, uTed, nangabangani bakhe. (Umsebenzisi ucabanga nokuthi ubengavele ayiphuphe le ndaba noma ayicabange.) Ngaphandle kwalokho, uthathe isinqumo sokuzifaka endabeni njengomlingisi kaPhoebe Buffay futhi alande izimpilo zabangani bakhe ngokufanele. Lo mbono uthi, endabeni kaTracy, unguFebe; UMarshall noLily nguMonica noChandler; futhi uBarney nguJoey. Ubhala indaba ye I-How I Met Your Mother izinhlamvu, kepha usebenzisa i- Abangane abalingiswa ukukwenza. Uyangilandela?
Futhi lokhu kunengqondo, uma ucabanga ngakho. UMarshall noLily bathandana ngokungenathemba futhi, kwesinye isikhathi, bahlala ngokubambisana ngabangane babo abangashadile — njengoMonica noChandler. UBarney ungumuntu othanda abesifazane ongenathemba, njengoJoey. UTracy uyinqaba ongadlala umculo, njengoPhoebe.
Lokhu kubashiya kuphi uTed noRobin, noma kunjalo? USangamFlevo ucabanga ukuthi uTracy wathandana noTed ngokuhamba kwesikhathi emshadweni wabo futhi wabhala ukuthi ngubani athemba ukuthi wagcina enaye: inzalo yakhe yothando engama-20, uRobin. Lokho kusho ukuthi uTed nguRoss, kanti uRobin nguRachel. Lokhu kuhlola ngokwengeziwe uma ukhumbula ukuthi uTed noRoss bobabili bangosolwazi. Futhi, uRachel uyilungu elisha sha le- Abangane gang, kufana nokuthi uRobin ukhona I-How I Met Your Mother . Ingqondo ishayiwe, akunjalo?
Ingabe lokhu kunwebekile? Impela. Kepha kuyathandeka ukucabanga ngakho. Siyayithanda iSangamFlevo ngobuhlakani bayo nalena!
izinto ezimbi ukwenza nesoka lakho
indlela yokwenza izinwele zakho zikhule
imibono emihle yezipho zokugubha usuku
melania trump anginendaba nawe